तपाईं इटाली जहाँबाट रेल द्वारा शहर पुग्न सक्दैन, वा थप, जस्तै स्विट्जरल्याण्ड र फ्रान्स. त्यहाँ नियमित छन्, मिलान र रोम देखि हरेक दिन धेरै पटक जाने उच्च गतिको रेल, तर देखि पनि भेनिस. यी भ्रमणहरू दुई भन्दा कम घण्टा लिन, र तपाइँले हेर्ने मौका पाउनुभयो सुन्दर पहाडहरू र इटालीको क्षेत्रहरू.
त्यसैले तपाईं युरोप मा रक्सी शहर रमाइलो गर्न तयार छन्? SaveATrain.com तपाईं कुनै पनि शहर प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ युरोप, छिटो, सस्तो, र एक मुस्कान संग!
ट्रेन यात्रा बेल्जियम, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा इटाली, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, यात्रा युरोप
केही यूरो बचत अनि एक रेल यात्रा युरोप लिनुहोस्
किन तपाईं पेरिस गर्न शीतकालीन मा यात्रा तालिम गर्नुपर्छ